Saraakiisha Ciidamada Itobiya ee soo Galay Degmada Balanbale, Gabalka Galgaduud, Somaliya oo Gabaanadaya Odaaysha Dhaqanka – Rasaasa News
Jun 13, 2009 ethiopia, Ogaden, Somaliya
Balanbale – Galgaduud, Ciidamada Itobiya ayaa gala kolka ay doonaanba dalka Somaliya, wax yeelana u gaysta cida ay doonaan meesha ay doonaan ha ka joogaan Somaliyia.
Hadana, Odayaasha dhaqanka iyo Maamulka degmada Balanbale ee gabalka Galgaduud, ayaa ka warbixiyay Ciidamo Itobiyan ah oo malintii shalay gudaha u galay Magaaladaasi.
Gudoomiyaha Magaaladaasi Xareeri Xasan Barre ayaa sheegay in ciidamadaasi ay la qaateen kulan islamarkaana ay weydiiyeen ujaadada Safarkooda iyo qorshaha ay ku yimaadeen Magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud.
Waxaa uu sheegay in ay u shegeeen ciidamada Itobiya in imaanshahooda ay uga golleeyihiin xoojinta Ammaanka iyo nabad galyada iyo xasiloonida deegaanada Ismaamulka Soomaalida [Ogaden] ee Itobiya ay gacanta ku hayso taas oo ay sheegeen in degmada Balanbale ay la leedahay Xad.
Qaar ka mid ah Odayaasha dhaqanka ayay Ciidamada Itobiya ka dalbay saaka arootii in ay kulamo la qaataan,waxaana ay qaar ka mid ah dhaliileen imaanshahooda magaaladaasi, laakiin gudoomiyaha ayaa sheegay in aysan u sheegin ujeedada dhabta ah ee ku wajahan imaanshiyahooda.
Ciidamada Itobiya oo ku qalabaysan gaadiidka dagaalka ayaa waxaa ay fadhiisimo ka dhigteen galbeedka Magaalada Halkaasi oo ay wali ku suganyihiin, waxaana imaanshahooda uu ku soo aadaya xili mudooyinkii ugu dambeeyay qeybo ka mid ah gobolka Galgaduud uu ka taagnaa dagaal u dhaxeeya Xarakatul Shabaabul Mujaahidiin iyo Ururka Ahlu Sunna Waljamaaca.
Ciidamadaasi ayaan la ogeyn waqtiga ay ku sii nagaan donaan halkaasi iyo in ay meel kale u ruqaansan doonaan, waxaana soo galida gobolka Galgaduud ka xumaaday dadweyne aad u badan oo ka mid ah dadka deegaanka Balanbale.
Ciidamada Itobiya ayaa gal dalka Somaliya iyaga oo taga meesha ay doonaan, kuna wax yeeleeya cida ay doonaan, tan iyo intii ay dhacday xukuumadii dhexe ee Somaliya.